Midowga Musharaxiinta oo war kasoo saaray go’aankii Rooble iyo jawaabta Farmaajo - Bulsho News
Midowga Musharaxiinta oo war kasoo saaray go’aankii Rooble iyo jawaabta Farmaajo
Muqdisho (Caasimada Online) – Midowga musharraxiinta Madaxweynaha ayaa boggaadiyay go’aanka uu RW Rooble shaqada kaga joojiyey agaasimaha Hay’adda Nabadsugida Qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Qoraal kasoo baxay Midowga Musharixinta ayaa waxaa lagu sheegay in go’aankaas uu fure u yahay caddaalad ay helaan qoyska Ikraan Tahliil oo la afduubay lana dilay.
“Goluhu waxa uu u arkaa in Go’aankaan shaqo joojinta uu fure u yahay caddaalad ay helaan qoyska Ikraan Tahliil oo la afduubay lana dilay. Waxay kaloo billow u tahay soo celinta sumcada hay’adda” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Golaha Midowga Musharixiinta.
Xaanshida kasoo baxday Musharixiinta ayaa taageero loogu dalbay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, Shacabka, Golaha Wadatashiga qaranka, Beesha Caalamka & dhinacyada taageera Soomaaliya.
Golaha Midowga Musharixiinta oo jawaab ka bixiyay go’aanka kasoo baxay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka qaatay shaqo joojinta Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabadsugidda & Sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday waxa uu caadeystay in uu saaxiibkiis kala weyn yahay Xuquuqda Muwaadinka, Dastuurka Dalka & Danta Qaranka” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Golaha Midowga Musharixiinta.
Hoos ka Akhriso Warsaxaafadeedka Midowga Musharixiinta.
Hirshabeelle: Yaa Ku Tartamaya Kursiga Ugu Adag Doorashada...